Silver Carbon Fiber Cloth nwere carbon ọdịnaya dị elu karịa 95% nke dabere na PAN mepụtara site na mbu-oxidation, carbonization na gramatation.It njupụta bụ ihe na-erughị 1/4 nke ígwè ebe ike bụ 20 ugboro ma ọ bụrụ na steel.It bụghị naanị nwere àgwà nke carbon ihe kamakwa enwere ike ịrụ ọrụ, mgbanwe nke eriri akwa.
Carbon Fiber Kpatụ
Carbon Fiber Kpatụ na ọdịnaya carbon dị elu karịa 95% nke dabere na PAN mepụtara site na mbu-oxidation, carbonization na graphitization.It njupụta bụ ihe na-erughị 1/4 nke ígwè ebe ike bụ 20 ugboro ma ọ bụrụ na steel.It bụghị naanị nwere àgwà nke carbon ihe ma nwekwara arụ ọrụ, mgbanwe nke eriri akwa.
Acha Carbon Fiber Cloth
Acha Carbon Fiber Cloth na carbon ọdịnaya n'elu 95% nke dabere dị ka PAN mepụtara site na pre-ọxịdashọn, carbonization na graphitization.It njupụta bụ ihe na-erughị 1/4 nke ígwè mgbe ike bụ 20 ugboro ma ọ bụrụ na steel.It bụghị naanị nwere àgwà nke carbon ihe kamakwa enwere ike ịrụ ọrụ, mgbanwe nke eriri akwa.
Green Carbon Fiber Fabric na carbon ọdịnaya n'elu 95% nke dabere ka PAN mepụtara site na pre-ọxịdashọn, carbonization na gramatation.It njupụta bụ ihe na-erughị 1/4 nke ígwè mgbe ike bụ 20 ugboro ma ọ bụrụ na steel.It bụghị naanị nwere àgwà nke carbon ihe kamakwa enwere ike ịrụ ọrụ, mgbanwe nke eriri akwa.
Satin Weave Carbon Fiber nwere carbon ọdịnaya dị elu karịa 95% nke dabere na PAN mepụtara site na pre-ọxịdashọn, carbonization na gramatation.It njupụta bụ ihe na-erughị 1/4 nke ígwè ebe ike bụ 20 ugboro ma ọ bụrụ na steel.It bụghị naanị nwere àgwà nke carbon ihe kamakwa enwere ike ịrụ ọrụ, mgbanwe nke eriri akwa.
Mmanụ aeyụ Carbon Fiber Fabric Ahịa na carbon ọdịnaya n'elu 95% nke dabere ka PAN mepụtara site na pre-ọxịdashọn, carbonization na gramatation.It njupụta bụ ihe na-erughị 1/4 nke ígwè mgbe ike bụ 20 ugboro ma ọ bụrụ na steel.It bụghị naanị nwere àgwà nke carbon ihe kamakwa nwere ike ịrụ ọrụ, mgbanwe nke eriri akwa.
Carbon Fiber Fabric Ahịa na carbon ọdịnaya n'elu 95% nke dabere dị ka PAN mepụtara site na pre-ọxịdashọn, carbonization na gramatation.It njupụta bụ ihe na-erughị 1/4 nke ígwè mgbe ike bụ 20 ugboro ma ọ bụrụ na steel.It bụghị naanị nwere àgwà nke carbon ihe kamakwa enwere ike ịrụ ọrụ, mgbanwe nke eriri akwa.
Carbon Fiber 4k nwere carbon ọdịnaya n'elu 95% nke dabere dị ka PAN mepụtara site na pre-ọxịdashọn, carbonization na gramatation.It njupụta bụ ihe na-erughị 1/4 nke ígwè mgbe ike bụ 20 ugboro ma ọ bụrụ na steel.It bụghị naanị nwere àgwà nke carbon ihe ma nwekwara arụ ọrụ, mgbanwe nke eriri akwa.
2x2 Carbon Fiber bụ eriri pụrụ iche nwere ọdịnaya carbon karịa 95% nke dabere na PAN mepụtara site na mbu oxidation, carbonization na gramatation.It njupụta bụ ihe na-erughị 1/4 nke nchara ebe ike bụ oge 20 ma ọ bụrụ nchara. nke ihe carbon kamakwa enwere ike ịrụ ọrụ, mgbanwe nke eriri akwa.
Acryli faiba glaasi Cloth, Pu ntekwasa faiba glaasi Fabric Cloth, Acryli ntekwasa faiba glaasi Fabric, Uwe faiba glaasi, Acryli ntekwasa faiba glaasi, Aluminized faiba glaasi Cloth,